Ihe kacha mma Harry Potter 16 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ndị a bụ kacha mma Harry Potter ngwa anyị nwere na gam akporo na nke ị ga-enwe ike igosipụta ihe ọ bụla n’ime agwa ha, chọpụta ụlọ ị bụ ma ọ bụ hazie mkpanaka anwansi na iwu nke «Lumos».
Ka anyị na usoro isiokwu a ngwa nile di iche iche maka ndi na-enwe a saga onye mere ka anyị gabiga ọtụtụ ihe anwansi anwansi kemgbe ọtụtụ afọ ya na fim ya na sinima na n'akwụkwọ. Ugbu a aka ngwa na egwuregwu.
1 Harry ọkpụite: Ihe omimi Hogwarts
2 Spelly - Harry Potter na-ekwu okwu na ajụjụ!
3 Kedu ụlọ bụ ụlọ gị?
5 9 3/4 Amino maka Harry Potter na Spanish
6 mpaghara ọkpụite
8 Akwụkwọ Potter
9 Audible: Harry Potter Audiobooks
10 Mụta ise Harry
11 Hatta okpu
12 Isusu ochuru rylụ Crucio Harry
13 Kedu ihe ị masịrị gị? Harry Potter
14 WAStickers maka HarryPotter
15 LEGO Harry Potter: Afọ 5-7
16 Nyocha ajụjụ ọkachamara Harry Potter: U8Q
Harry ọkpụite: Ihe omimi Hogwarts
Ndị ọrụ egwuregwu Harry Potter maka gam akporo na nwere ihe karịrị nde 2 na reviewslọ Ahịa Play emeela ebe puru iche n’ebe ndi na eso uzo saga no. Ga-enwe ike ịchọpụta anwansi anwansi, gwakọta ọgwụ ike, ma mee ọdịiche dị n'etiti ndị amoosu na ndị amoosu na egwuregwu a nke kachasị mma anyị nwere nke Harry Potter. Anyị nwetara ya n'efu na freemium ahụ.
Spelly - Harry Potter na-ekwu okwu na ajụjụ!
Ma site na egwuregwu gaa na ngwa nke ejiri ihe omuma Harry Potter mee ka anyi wee nwee ha. N'etiti ọrụ ya bụ ikike ịkepụta ọgwụ na ọbụna mụta nwa ha site n'ikwegharị mobile. Ngwa nke saga kacha kwesiri ntukwasi obi ga-amata otu esi aba uru na oke ha n'ihi nnukwu ọdịnaya ọ na-enye site na ngwa anaghị akwụ ụgwọ maka gam akporo.
Developer: Digital n'ókè
Kedu ụlọ bụ ụlọ gị?
Nke a ngwa bu karikpi ma obu quiz, onye ga-ajụ anyị ajụjụ ka anyị nwee ike ịza ha nke ọma dịka o kwere mee. Ọ bụrụ na anyị na-akwụwa aka ọtọ, ọ ga-eme ka anyị mata ụlọ Hogwarts anyị nọ, ya mere jiri azịza akọwapụta nke ọma ka anyị wee mara ma ị bụ Gryffindor dị ka Potter, ma ọ bụ Slytherin dị ka Malfoy, ma ọ bụ ma eleghị anya ị bụ Hufflepuff ma ọ bụ Ravenclaw . Ngwa na-adọrọ mmasị na Spanish ịmatakwu banyere anyị na otu anyị ga-esi daba na mbara igwe nke JK Rowling kere.
Developer: Palọ ọrụ Appspain
A ihe karịrị na-akpali ngwa na olu ude nke mere na anyị nwere ike mepụta okwu Lumos na 5 wands. Ngwa nke choro na anyi nwere intaneti ka anyi mata uda olu iji rita oru anyi na Lumos ma obu mechie uzo ahu na Lumos. Ngwa n'efu na ndepụta a nke ngwa Harry Potter kachasị mma.
Developer: Ndị Hogwarts Latin
9 3/4 Amino maka Harry Potter na Spanish
Anyị na-eche ihu na netwọk mmekọrịta anyị raara nye Harry Potter eluigwe na ala na nke dị n'asụsụ Spanish ka ị wee nwee ike izute Fans dị ka gị chọọ ịkekọrịta ihe ọmụma, nkọwa gbasara akwụkwọ kachasị amasị ha ma ọ bụ otu ihe osise ahụ o mere mgbe ọ hụrụ otu n'ime fim ya ndị a kacha mara amara. Ọ na-enye gị ohere ikori na ndị ọzọ Fans, votu maka ọkacha mmasị gị akwụkwọ ma ọ bụ na fim, ịkọrọ ozi ọma banyere saga, na-agụ ma ọ bụ ọbụna biputere fan art na ị mere onwe gị, ma ọ bụ ọbụna na-eme ka gị onwe gị akwụkwọ nkà ihe ọmụma nke Hogwarts ụwa saga.
Developer: Amino ngwa ọdịnala
Ngwa na raara nye ịbụ egwuregwu 10 mini ka anyị wee mara ụlọ anyị nọ na ya ma ọ bụ naanị mepụta avatar anyị nke eluigwe na ala nke Harry Potter. Ngwa na-adọrọ mmasị maka onye ọ bụla na-eso ụzọ ma si otú a gaa ihe omume ndị dị nso na anyị nwere nso ụlọ ma ọ bụ naanị zute ndị anwansi ndị ọzọ dị ka anyị ma kesaa ihe ọmụma. Ọ bụghị ngwa maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ka ha na-adọ aka na ntị site na otu ibe ngwa ahụ na Playlọ Ahịa Play, mana ọ bụ maka ndị toro eto Harry Harry.
Developer: mpaghara ọkpụite
Egwuregwu Niantic, ndị okike nke Pokémon GO, Egwuregwu eziokwu gbara ọkpụrụkpụ dabere na mbara igwe nke JK Rowling kere kere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla gara aga. Soro otu igwe, mana ihe ọ pụtara inwe ike inyocha obodo ma ọ bụ obodo anyị iji chee ụdị ihe egwu niile ihu. Ọ na-adọta ọtụtụ ihe site na GPS na igwefoto, yabụ nye gị batrị mpụga ka ị nwee ike iji ọtụtụ awa soro ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ ndị enyi gị nwee nnọkọ na ị zutere na ngwa ọzọ na ndepụta a nke ngwa Harry Potter. Otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ndepụta ahụ iji banye na ya na n'oge na-adịghị anya enweela ike ịgafe nyocha 300.000 na Storelọ Ahịa Play.
Anyị anaghị arụ ọrụ banyere akwụkwọ edetu n'onwe ya, kama ọ bụ nke na-emekọrịta ihe na nke anyị ga-ahapụ iji ya dị ka a ga - asị na ọ bụ akwụkwọ edetu. Nke a bụ njirimara ya kachasị mma na ihe kpatara ya ji eme ya pụrụ iche. Mgbe ị na-ekwu na mmekọrịta, ọ bụ ya anyị ga-enwe ike ịjụ gị ajụjụ gbasara Quidditch, Hogwarts na akụkụ ndị ọzọ nke saga. A pụrụ nnọọ iche na-akpali ngwa anyị nwere maka free si Play Store. Ya mere, anyị nọ n’ihu akwụkwọ akụkọ anwansi Potter na-eche ka ị jụọ ihe ọ bụla. Have nwere ya n'asụsụ Spanish, egbula oge ịhọpụta.
Audible: Harry Potter Audiobooks
Leonor Watling na Amazon eruola nkwekọrịta iji bipụta akwụkwọ ọdịyo ya na olu onye omeegwu ma si otua weta ufodu akwukwo ya a kachasi mara dika ha bụ Harry Potter na Onye Mkpọrọ nke Hazkaban, na ọtụtụ ndị ọzọ ndị e bipụtara na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ihe ọhụụ na ọpụrụiche pụrụ iche n’ihi na ọ ga-eme ya kwe ka ịkpọọ akwụkwọ ọdịyo mgbe ị na-arụ ọrụ n'ime ụgbọ ala gị ma ọ bụ otu jiri ekweisi gị. Audiofọdụ akwụkwọ ọdịyo ị nwere n'efu n'efu maka ọnwa 1 ka ịnwere ike ịnwale ọrụ Amazon ọhụrụ, wee gaa na ndenye aha ọnwa. Otu n'ime azụmahịa kachasị mma anyị nwere na ndepụta a maka ndị fanyere ụwa nke Hogwarts.
Anụ: Akwụkwọ ọdịyo na pọdkastị
Mụta ise Harry
Ngwa raara onwe ya nye iji mụta otu esi ese Harry Potter na ihe niile ma ọ bụ ihe metụtara saga. Ọzọ nke dị mkpa maka ekele ndị ahụ na-enye anyị ohere ịbịaru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ahụ ha tinyere anyị. Ha nwere ọtụtụ nsogbu nke nsogbu na ọbụna nkuzi maka anyị ịmụta ngwa ngwa. Omume ya ọzọ na-anọghị n'ịntanetị.
Ngwa ọzọ ịmara ụlọ anyị nọ na saga na site na ajụjụ anyị ga-enwe ike ịnye ozi dị mkpa iji mepụta profaịlụ nke otu ụlọ. Anyị nwere ike ịnweta nkwupụta kwa ụbọchị ma nweta asambodo ọtụtụ nwere isiokwu ahaziri iche ma nwekwaa obi iru ala na ngwa a zuru oke maka Fans Harry Potter. Ikekwe ị nwere nkwarụ nke asụsụ ahụ, mana ọ ka mma ịga site na ịwụnye ya ma si otú ahụ gosi ịdị mma ya na uru ya. Nwere onwe gị ka ị ghara ịhapụ ya.
Isusu ochuru rylụ Crucio Harry
Egwuregwu a maara nke ọma maka ndị ọrụ ya na nke ahụ na-akpọrọ anyị gaa na mbara igwe Harry Potter iji hụ ma anyị ga-esusu ọnụ, ànyị ga-alụ di ma ọ bụ nwunye Nkọcha Crucio. Otu n'ime ngwa pụrụ iche na ndepụta a nke na-apụ na ndị ọzọ. Tụleela onye ị ga-esusu ọnụ na Hogwarts? Hamis ma ọ bụ Luna? Kedu maka ịlụ onye? So Sirius ka obu ya na Lupine? Ọfọn, na ajụjụ ndị ahụ anakọtara na ibe gị, anyị nwere ike ịme ka ọ doo anya ihe ngwa a na - akwụghị ụgwọ ka ị nwee ike ịwụnye ya na mkpanaka gị ugbu a.
Developer: RBE Nkebi
Kedu ihe ị masịrị gị? Harry Potter
Ngwa dị ezigbo ụtọ n'ihi na ọ bụ ajụjụ ọnụ nke a jụrụ anyị ihe gbasara Harry Potter na nke enyere anyị azịza abụọ. Ajụjụ dịka Ọ dịtụla mgbe ị chere onye gị na ya ga-eme mkpapụ na Hogwarts? Hamis ma ọ bụ Luna? Na-alụ ọgụ Sirius ma ọ bụ Lupine? Echefula ya n'ihi na ọ ga-etinye gị ihe karịrị otu oge na mma agha ma ọ bụ mgbidi n'ihi mkpa nke ajụjụ ya. Ọzọ ngwa ọzọ eji akwụ ụgwọ maka ekwentị gị.
WAStickers maka HarryPotter
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma Harry Potter akwụkwọ mmado n'ihi na gị gam akporo mobile ka animate na chats i nwere site na ngwa dị ka WhatsApp, nke a bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ngwa. Site na isiokwu dịgasị iche iche site na saga nke JK Rowling kere, ọ na-aghọ otu n'ime ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị nọ n'òtù WhatsApp metụtara ụwa a.
LEGO Harry Potter: Afọ 5-7
Un egwuregwu maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ na nke ị ga-akwụ ụgwọ ebe ọ bụ nke adịchaghị. Ha ga-enwe ike ijikwa ụfọdụ ihe odide ahụ na mkpanaka ha iji mee anwansi anwansi na egwuregwu LEGO nke na-enweghị ihe ọma na njirimara; dị ka egwuregwu ndị a nke otu LEGO maka gam akporo.
Nyocha ajụjụ ọkachamara Harry Potter: U8Q
Anyị mechaa ndepụta a nke kacha mma Harry Potter apps ya na egwuregwu ajuju ebe anyi nwere otutu puku n’ime ha iji gosiputa ihe omuma anyi banyere akwukwo ndi JK Rowling dere. Enweghị ya na Spanish, mana eziokwu na anyị enweghị ihe yiri ya n'asụsụ anyị mere ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche nye ndị chọrọ ịba ọgaranya na mbara igwe a.
Developer: ikpeazụ8 ajụjụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ihe kacha mma Harry Potter 16 kacha mma maka gam akporo